लिलीको अभावकोे तीज – Janaubhar
लिलीको अभावकोे तीज
प्रकाशित मितिः बिहिबार, भदौ २८, २०७५ | 185 Views ||
दाङ ÷ रातभर आएको भदौरे झरी घरभित्र छरपष्ट छ । ओत लाग्ने ठाउँ कतै छैन । घरभित्र पानी पसेर अगेनोको खरानी समेत बगायो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ कि लिली सार्कीको घर पुग्दा यस्तो दृश्य देखियो । तीज भएर होला गाउँमा निकै चहलपहल थियो । माईत आउने, जाने छोरीचेलीको बाटोमा उस्तै ओहर–दोहर थियो । छिमेकीहरु तीजको नाँचगान गर्ने तयारीमा जुटदै थिए । भदौको झरीले लुथुक्क भिजेकी लिलीले भनिन–‘यो पापी चाडपर्व किन आउँछ’ । खरका २÷४ वटा मुठा प्लास्टिक, छाताका टुक्रा,टाक्रीले टहरा ेमुनि बसेकी उनको अनुहारमा कतैं उज्यालो देखिएन् ।
ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ परेको गुन्योले बेरिएकी लिलीलाई यसपालीको तीजमा त जसरी नि गुन्यो फेर्छु भन्ने लागेको थियोे तर त्यो पनि पुरा भएन । आर्थिक अभावका कारण आफुले बर्षेनी उस्तै समस्या भोग्दै आएको बताइन् । घरमा खाने अन्न केही नहुँदा अघिल्लो बर्षझै यसपालीको उनको तीज पनि अभावमै बित्ने भएकोमा दुखेसो छ । घरमा आउँने छोरीचेलीलाई खुवाउने चामल समेत छैन,मलाई कस्तो समस्या होला ? उनले भनिन ।
बासको सिटाले अड्याएको बुकुरोका मर्ने दिन कुर्दे आएको उनले बताईन् । श्रीमानको मृत्युसँगै आफना दुःखका दिन शुरु भएको भन्दै लिलीले घरमा छोरीचेली आउँदा ओड्ने,ओछ्याउने कपडाको समेत अभाव रहेको वताइन् । ‘खानलाई चामल,नून तेल छैन, मागेर कसैले दिदैन, उनले भनिन । भोक,भोकै बस्ने बानी पर्न लाग्यो, धेरै रात भोक, भोकै काटेको छु उनले भनिन् । गाउँलेहरुले पहिले अलि–अलि सहयोग गरे पनि आजभोलि त्यस्तो अवस्था छैन, आँखाभरी आँशु झादै लिलीले भनिन् ।
कसैले दया गरेर दिएको दुई, चार पैसाले घर चलेको छ विरामी भए औषधी खाने पैसा हँुदैन लिलीले भनिन् ।अरु बेला माग्न गए दिदैनन् चाडपर्वका वेला यसो एक,दुई पैसा आउँछ त्यसले भोको पेट भर्छु । ‘साँझ–बिहानको हात, मुख जोड्न समस्या भएको भन्दै आफू यस्ता चाडपर्व आउँदा झन दुःखी हुने वताइन् । यस्तो अवस्थामा अलिकति मन र धन हुनेले सहयोग गरे आफ्नो उद्दार हुने लिलीले बताइन् ।
Prevभारतमा कपाल चोरको विगविगी
Nextकान समोतर उठबस गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदा